သငျသညျရွှေ့အခါ, တစ်ဦးခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာထဲမှာ, ဗီရိုထဲမှာအမှုအရာထားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
သင်၏အသက်တာကိုရိုးရှင်းဖို့ရိုးရှင်းတဲ့အကြံပေးချက်များ - အမှုအရာထားရန်ကဘယ်လို
စနစ်တကျအမှုအရာထားရန်မည်သို့သတင်းအချက်အလက်မှန်မှန်ကန်ကန်အာကာသကိုသုံးပါနှင့်အများကြီးပိုသောအရာတို့ကိုနေရာချချင်သောသူတို့အဘို့အသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ တည်ဆဲနည်းစနစ်ဗီရို, ခုတျ, ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာနှင့်အိတ်၌အမှုအရာထားရန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
စနစ်တကျအမှုအရာကိုသိမ်းထားဖို့အထူးတီထွင်ခဲ့ကြသည် စီစဉ် compactly ကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုလိုက်လျောညီထွေနိုင်သည့်။ သူတို့ကအများအားအတွင်းစင်ပေါ်အပေါ်တစ်ဦးကက်ဘိနက်ထဲမှာထားနေကြသည်။ ညာဘက်ဗီရိုထဲမှာအမှုအရာထားရန်ဤအကြံပြုချက်များကိုသုံးပါ:
ယင်းကျယ်ပြန့်ပြည်နယ်အတွက်ဇီယာသိုလှောင်ရန်လွယ်ကူ။ အထူးစီစဉ်ဒီ oblong အခန်းရှိသည်။ သေးငယ်တဲ့ကွန်တိန်နာများအတွက်ဒီဇိုင်းကို Socks ။
ဗီရိုထဲမှာအာကာသကယ်ဖို့, သင်ခေါက်အမှုအရာ၏ရိုးရှင်းနည်းစနစ်ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤတွင်လူကြိုက်အများဆုံးသူများဖြစ်ကြ၏:
ကို Socks ။ တစ်စုံချိတ်ဆက်ပါနှင့်တစ်ဝက်၌ခေါက်။ အဲဒီနောကျတဖနျဖနောင့်ဖွင့်နှင့်အစွန်းပေါ်သော SOCKS ၏ cuff ၏အဆုံး tuck ။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်စည်ရပါလိမ့်မယ်။
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ panties ။ မှန်ကန်စွာဗီရိုထဲမှာအဝတ်ခေါက်ဖို့ဘယ်လိုဖော်ပြ, သင်အာရုံစိုက်မှုနှင့်အတွင်းခံဆပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျများ၏ရှေ့မှောက်၌သူမ၏ panties ထားအလျားတစ်ဝက်၌သူတို့ကိုခေါက်, အဲဒီနောက်စင်တာ၌အခြမ်းအစိတ်အပိုင်းများကိုခေါက်ပြီးထပ်မံဝက်အတွင်းခေါက်။
ဘောင်းဘီတို။ ဘောင်းဘီတိုကိုဆင်းရင်ဆိုင်ရအိပ်လေ၏။ ဗဟို၏ဘေးထွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုခေါက်။ တဖန်ထို့နောက်ဝက်အတွင်းခေါက်လျက်, ဘောင်းဘီတိုမှထိပ်ကိုနှိမ်နင်းဖှငျ့။ ဒီ option ကယောက်ျားရဲ့အတွင်းခံအဝတ်အစားအဘို့သင့်လျော်သည်။
ဂျင်းဘောင်းဘီ။ ပြားချပ်ချပ်ချွတ်ရရှိရန်ဗဟိုမှတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှခြေထောက်နှင့်အပြူးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိပ်ခေါက်။ ခါးပတ်၏အောက်ဆုံးမှခြေထောက်အစွန်းတင်းကျပ်။ ကိုယ်ကသာဂျင်းဘောင်းဘီသုံးကြိမ်ခေါက်ရန်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထိပ်သင်ဂျင်းဘောင်းဘီဖြစ်သောဆုံးဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုမယ့်အိတ်ကပ်ခဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်အကြံပြုသည်တစ်ဦးဝန်ကြီးအဖွဲ့မှာသူတို့ကိုချပြီး။
ရှပ်အင်္ကျီ။ ပထမဦးစွာအလယ်ဗဟိုဖို့လက်နှင့်ဝက်အူရဲ့အရှည်တစ်လျှောက်တွင်ဝက်အတွင်းအဝတ်ခေါက်။ တဖန်တစ်ဝက်၌သူတို့ကိုခေါက်။
ရှပ်အင်္ကျီ။ ဂျာနယ်ပြင်ဆင်ပါနဲ့ကြယ်သီး။ စားပွဲပေါ်တွင်ရှပ်အင်္ကျီမကျြနှာကိုအိပ်လေ၏။ မဂ္ဂဇင်းထားရန်နောက်ကျောကော်လာအလယ်၌။ ဗဟိုမှနှစ်ခုအနားခေါက်နှင့်အင်္ကျီလက်ခေါက်။ နောက်ဆုံးမှာဝက်အတွင်းခေါက်ထားရမည်တဲ့ပြားချပ်ချပ်ချွတ်, ရရှိရန်။ ယင်းစတုဂံထိပ်ပေါ်တွင်ကော်လာရဖို့မဂ္ဂဇင်းဆွဲရန်ရှိနေပါဦးမည်။
ဂျာကင်အင်္ကျီ။ စနစ်တကျအမှုအရာထားရန်မည်သို့မည်ပုံထွက်ရှာဖွေမရှိကြိုးကွင်းလည်းမရှိသည့်အခါအသုံးဝင်သည်အရာရိုးရှင်းသောနည်းလမ်း, ကိုဆက်ကပ်။ ပထမဦးစွာလက်ကိုထိစရာမလိုဘဲထွက်အတွင်းရှိဂျာကင်အင်္ကျီကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ထိုအခါအတူတကွရှက်ခေါက်ပြီးတော့ဝက်အတွင်းခေါက်။
တစ်ဦးနည်းလမ်းကို KonMari အပေါ်အဝတ်အစားတွေဝတ်မထားဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
အိမ်သူအိမ်သားအထူးကုမာရီ Kondo အတွက်အလို့ငှာ restore လုပ်ဖို့ compactly ဗီရိုထဲမှာအမှုအရာသိုလှောင်သင်ပေးလိမ့်မည်ဟုအသုံးဝင်သောအကြံပေးချက်များ၏နံပါတ်ပေးသည်။ အမှုအရာညာဘက် KonMari နည်းလမ်းထားရန်မည်သို့အောက်ပါညွှန်ကြားချက်ကိုသုံးပါ:
အခြေခံစည်းမျဉ်းကို - တစ်စတုဂံပုံသဏ္ဍာန်ပေးထားသင့်ကြောင်းအရာဒေါင်လိုက်သိုလှောင်မှု။
ဥပမာ, အရောင်, ဦးတည်ရာကို, ဒါမှမဟုတ်လျှပ်ဘို့, sort နှင့်စုစည်းဖို့အကြံပြုကြိုးကွင်းပေါ်မှာအမှုအရာ။ မာရီသူ့ကိုယ်သူပြီးခဲ့သည့် option ကိုအသုံးပြုသည်။
အသေးစားပစ္စည်းများဥပမာ, သေတ္တာများအတွက်လုံးဝနီးပါးမဆိုအာကာသအတွင်းဿုံ fit တဲ့ဖိနပ်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး Locker အတွက်သားသမီးရဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်မထားဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
ဒါဟာအသုံးပြုမှုရာသီအလိုက်နှင့်ကြိမ်နှုန်းအားဖြင့်သူတို့ကိုခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့်သောအရာတို့ကို sort ဖို့အစောပိုင်းအဆင့်အကြံပြုသည်။ ဝေး - ဤကိုလည်းထို့နောက်သူ့ကိုပိုမိုနီးကပ်စွာနှင့်မရှိသလောက်ဖြစ်ကြောင်းသူတို့အားနေထိုင်လိုအပျကွောငျးအရာမြားရှိပါတယ်, မှန်ကန်စွာမွေးကင်းစကလေးအဘို့သားသမီးရဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုအခြေအနေများသက်ဆိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျ shoeboxes sorting သုံးနိုငျသညျ, သငျသညျအမှုအရာမှတဆင့် sort လွယ်ကူပြန်လည်ရယူခြင်းများအတွက် box ကိုလက်မှတ်ထိုးနိုင်ပါတယ်။ အမှုအရာအထကျဖျောပွထားသောနည်းစနစ်အပေါ်ဖြစ်သင့် Minimize ။
ကက်ဘိနက်သို့မဟုတ်တျ loading တဲ့အခါမှာအိမ်တွင်မသာ, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းနေရာလေးကိုသောအရာတို့ကိုသွင်းထားရန်နည်းလမ်းများ, ဒါပေမယ့်လည်းဥပမာ, အဝတ်သေတ္တာများစုဆောင်းခြင်းကာလအတွင်းခရီးသွားဘို့သို့မဟုတ်သေတ္တာများရွေ့လျားသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဂရုတစိုက်သောအရာတို့ကို ထား. , သူတို့သက်ဆိုင်ရာနဲ့အိတ်အခကြေးငွေရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာတဝှမ်းခရီးသွားများအတွက်အားဖြင့်ပျော်မွေ့သည်အခြားအခွင့်အရေးများရှိပါတယ်ဖို့ဘယ်လိုရည်မှတ်အတော်များများလျှို့ဝှက်ချက်များ။
အစစ်အမှန်ပြဿနာ - သင်လိုအပ်နှင့်ဘာမျှမမှားသွားတယ်အရာအားလုံးထားရန်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာထဲမှာထုပ်ပိုးရန်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးစနစ်တကျတဲ့ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာသို့သောအရာတို့ကိုသွင်းထားဖို့ဘယ်လိုပေါ်ရိုးရှင်းသောအကြံပေးချက်များမှကူညီပေးပါမည်ခုနှစ်တွင်:
သင်ဤလက်ဝါးကပ်တိုင်လုပျနိုငျသောရေကူးဝတ်စုံ, အတွင်းခံအဝတ်အစားများနှင့်ခြေအိတ်၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည် rumpled လျော့နည်းအောက်ခြေမထိုက်မတန်သောအရာတို့ကိုဖြစ်ပါတယ်, ပြီးတော့အများဆုံးသပ်မရပ်ဝတ်စားကြောင့်လည်းမရှိ။
ဖိနပ်အိတ်၌အိပ်ခြင်းနှင့်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ၏အောက်ခြေပေါ်မှာသူတို့ကိုထားပါ။ အတွင်းပိုင်းအာကာသအတွင်းအလှကုန်, အတွင်းခံအဝတ်အစားများနှင့်ခြေအိတ်ဝတ်နိုင်ပါတယ်။
အဝတ်သေတ္တာများအတွက်ဖော်ပြထားခရီးသွားအိတ်သင့်လျော်သောအကြံပြုချက်များသည်။ သင်ပထမဦးဆုံးအပိုဘာမှမယူဘဲ, လိုအပ်သောအရာစာရင်းတစ်ခုလုပ်ရပေမည်။ တွန့်ဆုတ်ကြဘူး, အဝတ်ခေါက်ဖို့ဘယ်လို, ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသုံးပါ:
အောက်ခြေတွင်အိတ်ထုပ်ပိုးထားတဲ့မိုးသည်းထန်စွာအဝတ်နှင့်ဖိနပ်, အိပ်လေ၏။ အောက်ခြေနှင့်နွေးထွေးသောအဝတ်နှင့်စာအုပ်များချထားပါ။
ပြီးနောက်လိပ်ထဲမှာခေါက်, အဝတျအစားသွင်းထားလေ၏။ အဆိုပါခါးပတ်အကြားကွာဟချက်ထဲမှာထည့်ထားနိုင်ပါတယ် pupyrchatuyu ရုပ်ရှင်ပတ်ရစ်, အမှုအရာအားသွင်းခြင်းနှင့်ပျက်စီးလွယ်သော, ကောက်။
အလှကုန်ထိပ်ပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်နှစ်ဖက်အပေါ် stacked နှင့်သေးငယ်တဲ့ဖလားအတွက်ရန်ပုံငွေများကိုဝယ်ခြင်းငှါ သာ. ကောင်း၏။
ဒါဟာအမှုအရာအလေးအိတ်ပေါ်ရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ခြင်းနှင့်အိတ်၏အလေးချိန်ကိုတိုးမြှင့်မယ့်ခေါက်စက္ကူ, တင်. အိတ်သွန်ရန်အကြံပြုသည်။
ထုပ်ပိုးများအတွက်အမှုအရာစက္ကူပျော့သောအထည်, ပူဖောင်းထုပ်ပိုးပြီးများနှင့် packets တွေကိုအရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိက, ကြီးမားတဲ့ကတ်ထူပြား box ကိုခိုင်ခံ့တိပ်ကွိုတငျပွငျဆငျသငျ့သညျ။ ရိုးရှင်းစွာနှင့်လျင်မြန်စွာသောအရာတို့ကိုသွင်းထားဖို့ဘယ်လိုပေါ်ရိုးရှင်းသောအကြံပေးချက်များရှိပါတယ်:
30 ကျော်ကီလိုဂရမ်မဖြစ်သင့်ကြောင်းတောင်းဆိုနေတဲ့ wt မော်နီတာသေတ္တာများ။ သငျသညျအရပျကိုဘင်ကနေရွှေ့ပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေသည်လက်မကိုအသုံးပြုပြီးဒီစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ဒါကြောင့်အပေါ်ကုလားကာ, အိပ်ရာပိတ်ချော, စောင်နှင့်: အဆိုပါပလပ်စတစ်အိတ်အထည်ထုပ်ပိုး။
အောက်ခြေနေရာအရပ်မှာ box ထဲမှာမီးဖိုချောင်တန်ဆာများစုဆောင်းခြင်းကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သတင်းစာသို့မဟုတ်ရေမြှုပ်သည်။ တစ်ကတ်ထူပြား - ပူဖောင်းထုပ်ပိုးပြီးရုပ်ရှင်နှင့်ချွန်ထက်တ္ထု beats ကြောင်းဟင်းလျာများ။
တိုင်းပြည်အတွင်း WASP ဖယ်ရှားပစ်ရဘယ်လိုနေသလဲ?
ဖွယ်ရှိသောနည်းလမ်းများ - လသာဆောင်ပေါ်ခိုဖယ်ရှားပစ်ရဖို့ကိုဘယ်လို
ကလေးများအတွက် dysbiosis ကုသမှု
အိမ်မှာရှိတဲ့ယိုစီးမှုကနေစပျစ်ရည်ကို - ထုတ်လုပ်အိမ်လုပ်အရက်၏အရှိဆုံးမူရင်းစိတ်ကူး
ဖလား - စာရွက်
Soursop လက်ဖက်ရည် - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
ဒါဟာ mimimi င်: မိမိတို့၏ Mini-မိတ္တူနှင့်အတူ chetverolapye မိခင်များ!
စာအုပ် "Calculator အနာဂတ်" ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အဲရစ် Siegel